Funda ▷ ➡️ Discover Online Online ➡️
Ukuba awukaqondi ukuba yintoni na ukuxhotyiswa nokuba ungakusebenzisa njani; ke unethamsanqa, kuba apha siza kucacisa yonke into odinga ukuyazi ngayo; Ngokuqinisekileyo xa ugqiba ukufunda, isihloko siya kucaca ngakumbi kuwe. Yintoni ukuxhotyiswa? Okokuqala, kubalulekile ukuqaphela ukuba igama ... ufunde kabanzi
Awuzange uzibuze ukuba yintoni imilo unxantathu we-isosceles; apha siza kuchaza yonke into oyifunayo ukuyazi ngayo, ekugqibeleni iikhonsepthi ziya kucaca ngakumbi. Unxantathu we-Isosceles Lo mzobo wejometri ngowona ulungeleleneyo okhoyo, unamacala amabini alinganayo kunye nelinye elahlukileyo. Nokuba uthambeke kangakanani... ufunde kabanzi
Amanani ejometri amele iifom zegraphic ezikhoyo kwiinkqubo ze-algebraic, izibalo kunye ne-arithmetic, kunye nabo unokwenza uyilo, udwebe amawaka eemilo, ekubeni zenziwe ngeentlobo ezahlukeneyo zemigca, esiya kukubonisa zonke iinkcukacha zabo. Amanani ejiyometri Amanani eJiyometri ngawo onke laa migca igobileyo, eyaphukileyo, exutyiweyo esebenza... ufunde kabanzi
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba ngubani uPythagoras?Siyazi ukuba ukhe weva ngaye kwiincoko ezininzi, kodwa akumazi ukuba ungubani. Ewe, namhlanje sikuzisa yonke into enxulumene nale ngcaphephe yeGrike eyaziwayo, ungaphoswa. Ngubani uPythagoras? Ebizwa ngokuba nguPythagoras waseSamos, wayesisithandi sobulumko esingumGrike nesazi sezibalo, umseki... ufunde kabanzi
Ukhe wanengxaki ngetheyibhile zophindaphindo ukusuka ku-1 ukuya ku-10? Kulungile, ungakhathazeki; namhlanje sikuphathele iingcebiso kunye namaqhinga ukuze ufunde inyathelo ngenyathelo kwaye xa sele ugqibile ukuziqonda, ungaphoswa. Iitheyibhile zokuphindaphinda ukusuka ku-1 ukuya kwi-10 Xa sasiqalisa izifundo zethu zokuqala... ufunde kabanzi
Ngaba wakha wazibuza ukuba yintoni infinity? Namhlanje uya kuba nethuba lokucacisa yonke into ehambelana nesi sihloko esinomdla kakhulu esinabantu abaninzi entloko, ungaphoswa. Okungapheliyo Ligama lokubonisa ukuba akukho siphelo, akukho mda, kukho unaphakade kwaye zininzi izinto ezikhoyo… ufunde kabanzi
Ngaba ungathanda ukwazi ukuba yintoni kunye nendlela yokuhlanganisa amanani endalo?Ukuba awuzange uve ngayo; namhlanje siza kukuxelela ukuba lo msebenzi unomdla wenziwa njani, hlala kwaye ungawuphosi. Ukusondeza amanani endalo Xa ndithetha ngokusondeza amanani endalo sithetha ukuba siza kunciphisa inani lawo... ufunde kabanzi
Ukuba ukhe wanengxaki yokusombulula isibalo ngenqaku lesishumi, namhlanje siza kukuxelela indlela yokwenza oko ngendlela elula, ngaphandle kobunzima obungaka kunye neenkqubo ezilula; Gcobani kwaye ungaphoswa leli nqaku. Ukudibanisa kunye nenqaku ledesimali Ukudibanisa kunye nokuthabatha ngenqaku leshumi yenye yemisebenzi yezibalo apho ezinye ... ufunde kabanzi
Mhlawumbi ukhe wazibuza ukuba zeziphi iisimboli zemathematika, kwaye zisetyenziswa njani. Ukuba kunjalo, ufikile kwindawo efanelekileyo, kuba apha siza kuchaza yonke into oyifunayo ukuze wazi ixesha lokusebenzisa le mifuziselo ibalulekileyo. Dibana nathi! Iimpawu zemathematika IMathematika ibanzi kwaye, ngaphezu koko, inika umdla. … ufunde kabanzi
Amaxabiso eedesimali kwinani ahlula isiphumo sexabiso elingachazwanga; Ibandakanya umelo olunesiphelo. Ibhalwe kwisistim yamanani ngoko ke ithathwa njengenani eliqiqileyo. La manani asetyenziselwa ukuchaza amanani achanekileyo okanye xa kungekho xabiso okanye umphumo. Idesimali... ufunde kabanzi
Ngokuqinisekileyo uye wazibuza ukuba yintoni ipropati ehambisayo kunye nendlela enokusetyenziswa ngayo. Ukuba kunjalo, ngoko ufikile kwinqaku elifanelekileyo, kuba apha siza kuchaza ngendlela elula kakhulu yonke inkqubo yalo msebenzi wezibalo omnandi. Dibana nathi! Ipropathi eyabiwayo Kuyinto eqhelekileyo ukuba namathandabuzo malunga nokuba yintoni ipropati eyabiwayo?. Ngoko... ufunde kabanzi
Ukuba unokungabaza malunga nokuba yintoni ipropathi yokudibanisa kunye nendlela esetyenziswa ngayo, ke eli nqaku lenzelwe wena. Siza kukuchazela yonke into ekufuneka uyazi ukuze ukwazi ukwenza imisebenzi yakho yokunxulumana ngendlela elula. Kuya kuba mnandi! Ipropati yonxulumano Yintoni? Uya kuba ukhumbule xa kwisikolo samabanga aphantsi, sathetha malunga nepropathi yokutshintsha kunye ne-associative; kakuhle,... ufunde kabanzi
Kwakuba kusenzeka kum ukuba, ndikwiklasi yomzobo wobugcisa, andizange ndikwazi ukusebenzisa isikali se-1:50, kwaye kwakungenakwenzeka ukuba ndenze umsebenzi wam ngokuchanekileyo; Ukuthintela oku kungenzeki kuwe, apha siza kuchaza yonke into okufuneka uyazi malunga nesikali kunye nokusetyenziswa kwayo. Indlela yokusebenzisa isikali? … ufunde kabanzi
Akumangalisi ukuba xa siqala ukugoba kwimiba yejometri, sizibuza: Yintoni i-circumference, kwaye ziziphi iimpawu zayo? apha namhlanje, siza kuthetha ixesha elide ngesi sihloko, sijoyine. Ngaba uyazi ukuba yintoni isangqa? Ukuthetha ngokusesikweni, kuyenzeka ukuchaza isangqa njengomgca ovaliweyo we... ufunde kabanzi
Sonke ngaxa lithile ebomini bethu sizibuze ukuba yintoni na ububanzi besangqa, kwaye impendulo ngokwenene ilula kakhulu; kodwa ukuba awukayazi, hlala apha, siza kukucacisela ngokulula kakhulu. Yintoni idayamitha? Ukwazi ukuba yintoni i-diameter kulula kakhulu; Yi le … ufunde kabanzi